Qodobbada Stephanie Shreve ee ku saabsan Martech Zone |
Maqaallada by Stephanie Shreve
Noocyada waaweyni waxay helayaan, qaybo badan oo dhaqdhaqaaqa ayaa muuqda. Noocyada lagu iibiyo shabakado ganacsi oo maxalli ah waxay leeyihiin yoolal ganacsi oo aad u adag, mudnaanta, iyo khibradaha khadka si loo tixgeliyo - laga soo bilaabo dhinaca astaanta ilaa heerka deegaanka. Noocyada waxay rabaan in si fudud loo ogaado oo loo iibsado. Ganacsatadu waxay rabaan hogaan cusub, taraafikada cagta oo badan, iyo iibka oo kordha. Macaamiishu waxay rabaan xog ururin iyo waayo-aragnimo iibsi aan khilaaf lahayn - waxayna u rabaan si degdeg ah.